Munaasabadda 26-kii Juun | Doodwadaag waa Danwadaag.
Maanta waa maalintii calanka Soomaaliyeed uu ka dul babbaday gayiga Soomaaliya, gaar ahaan dhulkii gumeystuhu u baxsaday Soomaalidii Biritishka cialis vendre. Maalmo kadib waxaa raacay oo calankii buluugga ahaa isna laga taagat dhulkii isagana Talyaaniga u baxsaday Soomaalidii Talyaaniga. Labada magac ee Soomaalida Biritishka iyo Soomaalida Talyaaniga waxa ay ka tarjumaayaan adoonsi, kala qoqob iyo in ay ahaayeen labo walaalo oo gumeysi kala geeyay.. Maanta waa dharaartii unuggii koobaad ee Soomaaliya xuroobay, halkaana laga alkumay magaca Soomaliya.
Xaqiiqooyin dhab ah ayaa muhiim ah inaynu is xasuusinno iskuna baraarujinno, xaqiiqooyinkaa oo aad mooddo in waayahan danbe mugdi la galinayo sababo la xiriira dano gaar ah ama agaansho la’aan:
1-Adeegsiga erayga Soomaaliya waa tarjumaaddii natiijadii ka dhalatay isu taggii labada gobol iyo midiowgii loo heellanaa, loo haliilayay loona halgamay.Sidaa darteed, Soomaaliya waxaa la yiraahdaa isu tagga labadaa dhul.Nasiib darro waxaad maqashaa maalmahaan dad da’yarta ah ama dad iska indha-tiraya xaqiiqada taariikheed ee dhahaya, Soomaaliya iyo Somaaliland ama Soomaaliya iyo Buntland. Ma garanayno Soomaalida soo hartay haddii labadaa laga saaro magaca Soomaaliya!!!
2-Calanka buluugga ah ayaa isna leh qisada maanta oo aan la kala reebi karin 26-ka Juun, oo maalintii la taagay kana lushay magaalada Hargeysa.
3-Soomaaliya waa sida aanu kor ku soo qeexnay. Haddii la yiraahdo Soomaaliya waa dhulka 7-da u eg, ee ka abuurmay midnimadii labada gobol.
4-Soomaaliweyn, isna waa eray ka tajumaya doonistii Soomaaliya ay doonaysay xuraynta iyo soo dumista 3-da gobol ee ku haray wali gacanta gumaystaha, waa Waqooyi-bari, Jabuuti (oo markaa gumeysi ku hoos jirtay) iyo Soomaali galbeed. Hungowii aanu ka dhaxalnay doonistaa iyada ah iyo burburkii Soomaaliya, maanta nasiib darro waxaad maqleysaa qof Soomaali ah oo u yaqaanno Soomaaliweyn, Puntland, Somaliland iyo Koofurta.
Soomaaliya shalaydeedii way ka fiican tahay si kasta oo ay u jiraan turunturrooyin badan, waxaanu rajeynaynaa in Soomaaliya magacii ahaa uusan noqon magac loo huwiyay qiimahiisii iyo qaladkiisii dad gaar ah.
Soomaali bay nu nahay…Waxaanu u dhalannay Soomaaliya..Ha noolaato Soomaaliya. Waxaanu Eebbe ka baryaynaa in Soomaaliya qalbigooda burcad isu mariyo.